Soo dejisan Opera 74.0.3911.75 – Windows – Vessoft
Opera – browser deg deg ah oo loo jecel yahay joogitaanka haboon ee internet ah. Waxaa ka mid ah qaababka ugu muhiimsan ee browser waxaa ka furid ka deysid, taageero loogu daro kala duwan, muddo jeegga, isticmaalka yar yahay khayraadka nidaamka iwm Opera ka kooban yahay qaybo gaar ahaan loo isticmaalo ee browser in ay ka hortagtaa in la dhigo xisaabaadka iyo taariikhda websites u arkaan. Sidoo kale iyadoo adeegsanayo hab gaar ah oo browser-qaaduhu wuxuu xawaarihiisu sarreeyo of-sites web loading xiriir internet xun. Opera leedahay interface fudud oo dareen leh.
Support for technology casri ah
Anonymous joogo online
Qaabka of loading la dedejiyey internet-ka ee